The Lightest Electric Skateboard On nyika - Jomo Technology Co., Ltd
Power-kubatsira Kid sikuta
Self BALANCInG sikuta
The Lightest Electric Skateboard On panyika
Tinoratidzawo akafunga-anenge imwe yenzira kuramba zvinoshanda makakatanwa ari cheni tikachirega. Havasi vose hoverboard asi bedzi izvi Electric hoverboards izvo zvakakodzera certifications pakasimba kushandisa - ichi zvinosanganisira zvose soro 10 yakanakisisa hoverboards pasi apa. Vari zvakadaro kuitwa dzakabudirira. Kana iwe vanobatanidzwa pamusoro vanokodzera here unogona chitiviri bhasikoro uye kurishandisa pasi rubatsiro muoti. Kune Mini Harleys, midhudhudhu mapurisa, uye sevatsvaki vemapuranga. Takaona ikoko aifanira kuva nani nzira kugadzirisa pfupi yenzendo idzi. Zvadaro, zvichida, iwe wakanga nani kudzidza chii chaizvoizvo kukosha. Ungave kungotaura rwendo kuenda egungwa kuti egungwa bvunzo, musoro kunze kure-munzira tsvina, kana kuramba vaine onerous paburiro velocity Kugadzira vakakomba nharaunda, pane Koowheel Electric Skateboard vachiwirirana chose kwauri, uye kwako manyorerwo. futuristic Pfungwa zhinji kuonekwa zvakare sezvisingabviri kuti akachenjera, asi ichi skateboard yemagetsi chaizvoizvo anoshanda uye akava zvose mafaro uye anobatsira.
Kwakanyorwa inotonhorera chaizvo, zvinobudirira-akavaka uye zvinonakidza kuona inotonhorera zvikuru, zvakanaka-kuvakwa uye kunonakidza zvikuru! Unogona atasve kuti mumwe pakona muguta renyu. You zvimwe unogona chitsigiso achishandisa makona nyore AD ungaodzwa chete kunodiwa kuti kuvimba mberi kana shure kuitira kuti iwe unogona kuenda mberi kana harungashandurwi. Pane zvakawanda zviri sezvo dzinodzvova:
1. akakwana pfupi rwendo mudziyo dzakakwirira playability.
2. Lightweight, chiine, magiramufomu, nyore.
3. Cheap asi yakasimba.
The Powerboard Self vakadengezera sikuta ari wose. Zviri chaizvoizvo vakasvimha yakasiyana zvachose kuti mureza 'hoverboard' kuzvida BALANCInG Scooters Tiri kushandiswa! Zvepasi professionalrider apfungaire rwemberi tai, zviri rakaoma kufungidzira iye pamusoro sikuta.
Zvakakosha kutora kuchengeta zvayo kunonyanyisa velocity, bhatiri upenyu, pakubata, mabhureki, nhamba, kuchengetwa zvinodikanwa, uye warranties. No kungoerekana Kumira kuti ave nemi hurtling ngozi mberi. Paunofunga yemagetsi sikuta, Skateboards ingangowanikwa kwete kutanga pamusoro zvinyorwa. Uyu mumwe maviri vhiri yemagetsi kuzviriritira nepakati sikuta .You unogona mira pamusoro payo uye kunyange pafiripi 360 dhigirii mune nzvimbo. Mavhiri maviri injini anobatsira velocity uye isimbe. Izvi zvinokosha kufunga kuti, kana iwe uri munhu kufuta kana vakafutisa chaiyo munhu.
Post nguva: Jan-25-2018
Sign nokuda mugwaronhau yedu
NEMHAKA FOR TIME KWAKO